उम्मेदवारलाई लिङ्ग देखाएको भन्दै फोरम कार्यकर्ताले बाम कार्यकर्तालाइ कुटे, मेयरका भतिजको अवस्था चिन्ताजनक !
ARCHIVE, POLITICS » उम्मेदवारलाई लिङ्ग देखाएको भन्दै फोरम कार्यकर्ताले बाम कार्यकर्तालाइ कुटे, मेयरका भतिजको अवस्था चिन्ताजनक !
काठमाडौँ-गौशाला नगरपालिका मेयरका भतिजा प्रमोदले उम्मेदवार महतोका भतिज सचिव महतोलाई लिङ्ग देखाएको भन्दै विवाद बढेपछी फोरम कार्यकर्ताले बाम कार्यकर्ताहरुलाई क उठेका छन् । आफुलाई लिङ्ग देखाएर पिसाव फेरेको भन्दै सुरु भएको झगडाले दोहोरो झडपको रुप लिएको थियो ।
महोत्तरीको गौशालामा गएराति राजपा फोरमका कार्यकर्ताले वाम गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुमाथि आक्रमण गर्दा गौशाला नगरपालिका मेयर शिवनाथ महतोका भतिजा प्रमोद कुमार महतो गम्भीर घाइते भएको जिल्ल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एसपी कुवेर कडायतले जानकारी दिएका छन् । प्रहरीका अनुसार प्रमोदको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेकाे छ । गएराति १२ बजे गौशाला बजारमा दुवै पक्ष आमनेसाम्ने भएका थिए ।
घटनाको बाम गठबन्धनले घोर भत्र्सना गरेको छ । बाम गठबन्धने गौशालामा अहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाका बारेमा जानकारी गराउने भएको छ ।